Marna kali talis xal uma arko, haddii Farmajo leeyahay kala doorta Aniga, Alshabab &.. (Qormo C/raxman C/shakur) - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
W/Q: C/raxman C/shakur Warsame
Soddon sano ka hor maanta oo kale ayey Dowladdii Dhexe ee Soomaaliya duntay. Waxaan ahaa nin dhalinyaro ah oo dugsi sare soo dhameeyey, labo sano oo gurmad ah soo maray, dalkiisana shaqo iyo waxbarasho ka waayey, waxaan noqday xerow masaajida kitaabaha ka raacda.
Jabhado hubeysan ayaa rajiimkii kali taliska ahaa xukunka xoog kaga tuuray, kaddib markii lagu kari waaye in uu talada si nabad ah ku wareejiyo. Jabhadihiina taladii dalka iyo kala guurkii siyasadeed way ku heshiis waayeen.Toban sano kaddib ayaa magaalada Carta ee dalka Jabuuti Dowlad ku meel gaar ah lagu soo dhisay.
Toban kale ayey qaadatay in ku meelgaarkii laga baxo oo dunida laga aqoonsado dowladdeennii. Dowladda Soomaaliya waa mid taag daran oo tabar yar. Kooxda Al-Shabaab ee argagexisada ah waa xoog halis ku ah jiritaanka Dowladda, waxeyna doonayaan in ay dumiyaan. Dhinaca kale, waxaa jira xoog ay dunidu (Golaha Ammaanka) usoo xilsaaratay in uu Dowladda taagta daran ilaaliyo waana (AMISOM).
Xoogagga kale oo soo haray ee uu ugu horreeyo madaxweynaha, xukuumadda, labada aqal ee Baarlamaanka, Dowlad Goboleedyada, xisbiyada, siyaasiyiinta, waxey ku loolamayaan hoggaanka iyo talada ku habboon in dalka lagu hago, loogana saari karo taag darrida. Loolaankaas, waxaa garsoore ka ah qolada soo dirtay ciidanka ilaalada ah; waa beesha caalamka sidey u kala tun weynyihiin ayaa tweet koodu u kala tabar badanyahay.
“Kuma jiro kuwa u shalleysan kaligii taliskii hore ee dalka dagaalka sokeeye geliyey.
C/RAXMAN C/SHAKUR WARSAME
Maanta waxaa mugdi ku jiraa masiirkii doorashada iyo maareyntii xilliga kala guurka. Loomana sina ee Masuuliyaddeeda waxaa leh ninka dadka ugu xilka weyn oo ah Madaxweynaha. Nasiib darro waxaa ah in Madaxweyne Farmaajo uusan u fahamsaneyn in qabashada doorasho la isla oggolyahay oo si nabad ah ku dhacdaa ay guulihiisa wax qabad ka mid tahay. Taariikhdu waa tagto, haddana nool waa haddii lagu cibra qaato.
Cabsi weyn kama qabo in uu dhacayo dagaalkii billawgii sagaashankii oo kale. Sababtoo ah Soomaalida intii dalka joogtay, ama xeryo qaxooti ee dalka kale ku jiraa, silac iyo hoog nooc kasta leh ayey arkeen, intii qurbaha u qaxdayna nolol dabacsan, duni horumartay iyo ilbaxnimo ayey soo arkeen.
Haddii xoogagga uu madaxweyne Farmaajo ugu xil weyn yahay is fahmi waayaan, waxaa qasab ah in xoogagga kale, Al-Shabaab ama AMISOM midkood magan loo noqonayo. Haddiise Farmaajo leeyahay “ Aniga, Al-Shabaab ama AMISOM kala doorta” kolleey anigu marna kali talis xal uma arko, kumana jiro kuwa u shalleysan kaligii taliskii hore ee dalka dagaalka sokeeye geliyey.
Hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir iyo Musharax Madaxweyne
Puntland September 23, 2021
Wararka laga helayo magaalada Garowe ayaa sheegaya in xaalad kacsan ay ka taagan tahay magaalada Garowe, gaar ahaan garoonka diyaaradaha Jen. Maxamed Abshir, kadib...
Xog cusub September 23, 2021
Faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa kulan agaasimihii hore ee Hay'adda NISA ugu yeeray taliyeyaasha ciidamada Dowladda Federaalka oo ka dhacay xarunta Madaxtooyada. Xogta laga...
Doorashada September 23, 2021
Ra'isul Wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa xalay shir guddoomiyay kulan fogaan-arag ahaa, kaas oo ay ka soo qeybgaleen madaxda maamulka goboleeyda...
Doorashada September 22, 2021
Maamulka Somaliland ayaa war cad kasoo saaray Doorashooyinka Soomaaliya, waxayna u caddeysay in beesha caalamka inaysan wax shaqo ah ku lahayn Doorashadaasi. AKHRISO WAR-SAXAAFADEED Somaliland...
K/Galbeed September 22, 2021
Faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa qarax dhaliyey qasaare dhimasho iyo dhaawac leh oo maanta ka dhacay magaalada Marko ee Gobolka Sh/Hoose. Qaraxa oo ahaa...
Somali September 22, 2021
Wasiirka Amniga maamulka Galmudug Axmed Macallin Fiqi ayaa jawaab culus siiyey guddoomiye ku xigeenka Gobolka Banaadir Cali Yare oo xilligan hoggaamiya taageerayaasha Farmaajo ee...
Nuxurka Khudbadii ‘COVID-19’ ee Farmaajo u jeediyey Fadhiga Golaha Guud ee Qaramada Midoobay
Madaxtooyada September 22, 2021
Madaxweynaha Muddo xileedkiisu dhammaaday Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa xalay saqdii dhexe kadib khudbad lasii duubay ka jeediyey fadhiga 76-aad Golaha Guud ee Qaramada Midoobay. Khudbadda...
Federaalka September 21, 2021
Wararka laga helayo Madaxtooyada Soomaaliya ayaa sheegaya inuu weli socdo dadaal lagu doonayo in xal loogu helo khilaafka adag ee u dhaxeeya madaxweynaha muddo...
Doorashada September 20, 2021
Ra'iisal wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble ayaa dagaal xoog leh u galay inuu iska difaaco laba Qodob oo halis ku ahaa kaalintiisa hoggaanka...
Xog cusub September 20, 2021
Kulan ay soo qabanqaabiyeen xubno ay isku dhow yihiin Madaxweynaha Galmudug ayaa xalay dhex maray Ra'iisal wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo Axmed Cabdi Kaariye...